Koonfur Afrika - BBC News Somali
Taysiir hooyadeed oo sannad kaddib ka hadashay dilkii gabadheeda loo geystay
Jacob Zuma oo mar kale miiska saaran loona haysto fadeexado musuqmaasuq
Madaxwaynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma yaa lagu wadaa in su'aalo la xiriira eedeymo musuqmaasuq la waydiiyo iyada oo telfishinda dalkaasi si toos ah looga daawanayo maanta iyo guud ahaan toddobadka oo dhan.
Nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee Afrikaan Madoow ah oo ku guulaystay in uu tago hawada sare ayaa shil ku geeriyooday ka hor inta aanu riyadiisiixaqiijin.
Hooyo 'geesiyad ah' oo la dagaallantay raggii gabadheeda kufsanayay, midna ka dishay
Shacabka ayaa hooyadan u aqoonsaday inay tahay geesiyad u dagaallantay sida libaaxa
Dalka Koonfur Afrika waxaa si lixaad leh uga soconaya ololaha doorashada madaxtinimada ee la qaban doono maalinta Arbacada ah ee soo aaddan.
4 Maajo 2019
Dheemanki labaad ee dunida ugu weynaa oo la helay
Dheeman uu miisaankiisu weyn yahay waa marki labaad oo laga soo saaro dalka Botswana.
28 Abriil 2019
Madaxweyne ku xayirmay Tareen uu shacab la soo fuulay
Muddo saacado ah ayuu xayirnaa madaxweynaha
Baadari lagu xujeeyey inuu Mandela soo nooleeyo awoodduu sheegtay haday run tahay
Baadari reer Koonfur Afrika ah ayaa aad u dhaliilay mid kale oo uu ku eedeeyey inuu diinta "Masiixiyadda sharafta ka riday" kaas oo sheegtay inuu qof dhintay soo nooleeyey.
Abaalmarinta Komla Dumor 2019-ka: BBC oo raadineyso xiddiga ugu wanaagsan saxaafadda Afrika
Abaalmarintan waxaa loogu talagalay in lagu maamuuso Komla Dumor, oo ah saxafi u dhashay dalka Ghana oo BBC-da u shaqeyn jiray.
Supersonic: Gaarigan nooca tartanka wuxuu saacaddii soconayaa 1000 kiilo mitir saacaddiba
Darwalka tijaabiyey gaarigan oo saacaddi soconaya xawaara dhan 1,000 kiilo mitir wuxuu sheegay inuu qiimaha gaariga uu la mid noqon doono qiimaha gaariga Ferrari lagu iibiyo.
8 Disembar 2018
Madaxweynaha Koofur Afrika oo dib u bixinaya dhaqaale ku baxay ololihiisii madaxtinnimo
Madaxweynaha dalka Koofur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa dib u bixinaya lacag gaareysa ku dhowaad 35 kun oo doollarka Mareykanka ah taas oo shirkad musuqmaasuqa lagu eedeynayo lalana xiriirinayo wiilkiisa ay ugu deeqday ololihiisii madaxtinnimada.
18 Nofembar 2018
Shir diiradda lagu saarayo shaqa la'aanta hay'sata dhalinyarda oo lagu qabanayo Johannesburg
Madaxweynaha Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa todobaadkan waxa uu magaalada Johannesburg ku qabanayaa shir laba maalmood socon doona oo loogaga hadlayo sidii loo dardar gelin lahaa hababka shaqo abuurka ee dalkaasi.
4 Oktoobar 2018
Koonfur Afrika: Raxan shinni ah oo lagu arkay matoorka diyaarad kici lahayd oo baaqatay
Khubarada dinaca shinnida ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa waxay ku guuleysteen raxan shinni ah iney matoorka diyaaradda ka soo saaraan.
26 Sebtembar 2018
Dilalka ka dhaca Koonfur Africa ma lala bar-bar dhigi karaa 'goob dagaal'?
Koonfur Africa oo ka mid ah meelaha ay dilalka ugu badan ka dhacaan
18 Sebtembar 2018
Qarax ka dhashay warshad gubatay oo ay ku dhinteen 8 qof
Shaqaalaha dabdamiska ayaa ku gudajira baadigoobka dad lagu tuhunsan yahay iney gudaha warashadda gubatay ku jireen xilliga uu qaraxa ka dhacayey.
Ganacsatada yaryar oo alaabtooda ka raranaya Soweto ayagoo dhuumasho ku jira
Ajnabiga ku nool Soweto ayaa dhuumaalaysanaya, ka dib weerarro ajnabi nacayb ah oo lagu dilay 3 ruux. Rabshadaha ayaa ku fafay deegaannada kale ee u dhow Soweto.
Saddex qof ayaa lagu dilay magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika, waxaana la bililiqaystay dukaamo ay lahaayeen dad ajaanib ah. Tiro dad ah ayaa la xiray, magaalooyin kalena way ku faafeen rabshaduhu.
Booliska Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyey in laba qof lagu dilay isku dhacyo dhex maray dadka wadanka iyo ajaanibka ku nool isku raranta Soweto.
Jean Pierre Bemba oo ah hogaamiye mucaarad ah una dhashay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Congo ayaa la filayaa in maanta uu dib ugu laabto dalkiisa ka dib in ka badan 10 sano oo uu dibedda ku xirnaa.